Loogummaan osoo hinbarbadaa’in nageenyi hinargamu! | QEERROO
Dhiyoo dhuma kana waggaa 2 asitti Oromoo irraa ilmaan Oromoo bifa nama suukanneessuun yoggaa ajjeefaman, callisni miidiyaaleef qaamolee aangoo qabatanii jiranii mul’ataa ture. Namni 45 du’es, Ulfaaf Misirroon du’es hangas mara gurra laataniif rakkoo saba keenya Oromoo miidiyaaleen Impaayera Xoophiyaa keessaa gabaasuuf hinyaalle.
Daranuu ajjeefamuu saba keenyaa kanatti hedduu akka gammadan mallattoo agarsiisu kennaa turan.
Torban darbe kana ammoo hololas ha ta’u Shira PP’n saboota Amaaraa irratti ajjeechaan raawwate jedhamnaan an Muummicha Ministeera biyyaati jedhee kan of waamu dabalatee miidiyaaleen biyyattii marti “qulqullootatu ajjeefame!” Jechuun wal harkaa fuudhanii afarsan.
Asitti wanti naa hubatamuu qabu an ajjeechaa nama meesha maleeyyii kam irra gahu hindeggaru. Garuu loogiiwwan miidiyaalee biyya kanaa keessatti raawwataa jiraniif qaamolee bulchitoota ofiin jedhaniin raawwatan kan nagaaf tasgabbii namaa laatu miti.
Gaafa Oromoon ajjeefamu Cubbamootatu ajjeefame jedhamee callifama. Gaafa sabni Amaaraa ajjeefamu ammoo qulqulloota Xoophiyaatu ajjeefame jedhamuun miidiyaalenis namootiin dhuunfaas yoggaa wal harkaa fuudhanii afarsan arguun daranuu akkuma kiyya garaa sabboontota Oromoo akka madeesse cimseen hubadha.
Akka sabni keenya rakkoowwan akkanaa keessaa bahee bilisaan hinjiraanne, akka sabni keenya mootummaa isaaf ta’u filatee mootummaa nageenya isaa tiksu kan miidhama Oromoo dhukkubsatu hinijaarranne kanneen danqan Leellistoota Xoophiyaa Oromoo keessaa yaa’aniif ilmaan halagaa leellistoota Minilik fi Leellistoota TPLF ta’uu cimseen amana.
Isaan diina innikkaa ta’an kanneen akka TPLF fi Ilmaan Neo Minilik warra nuti hidda moototaati jechuun seenaa fokkataa abbaa isaaniif akaakilee isaanii akka waan seenaa ajaa’ibaaf seenaa gaarii ta’etti lallaban of irraa qolachaa. Diinota tarsiimoo warra Oromoo irraa dhalatanii Xoophiyaan akka hinkufne, akka hincabne Xoophiyaan cabuu irra Oromiyaan ha cabdu jedhanittis adaba barbaachisaa taasisuun Oromoo irraa barbaachisa.
Walii gala loogummaa fi hundeen loogii osoo hinbarbaadaa’in nageenyi waaraan biyya kanatti nii uumamaan soba. Eenyu eenyuu gadi miti, eenyus eenyuu ol miti. Marti ija wal qixaan hanga hinilaalamnetti, ilaalcha tokko halagoomsee saba tokko ammoo dhalootee biyyaa fakkeessu cabuutu furmaata.